श्रीमती वेल्सले दुई मुलुकका सेनाहरुबीच सहयोग बढाउने उपाय’bout पनि छलफल भैरहेको बताइन्।
“हाम्रो प्यासिफिक कमाण्डले नेपालको भूकम्प पछि मानवीय सहायता पुराउनमा, प्राकृतिक प्रकोपसंग जुध्ने मामिलामा निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो। त्यसैले हाम्रा दुई सेनाहरुबीच अरु बढी समन्वय तथा सहयोग बढाउने पनि हाम्रालागि एउटा प्राथमिकता हो,” उनले भनिन्। भर्खरै मैले अमेरिकास्थित तपाईंहरुका कुशल राजदूत (डा. अर्जुन कार्की) संग कुरा गरें। उहाँले पनि यो विषय मसंग उठाउनु भएको थियो। यो विषय’bout डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले हेरिरहेको छ। हाल अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका १४,००० भन्दा बढी नेपालीहरुको ‘टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टाटसु वा ‘टिपिएस’ भनिने अनुमति अब केही महिनाभित्रै सकिन लागेको भन्ने प्रश्नमा श्रीमती वेल्सले, उनकै शब्दमा, यस’bout एकदमै निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित पुनरावलोकन हुने बताइन्।
उनले भनिन्, “भर्खरै मैले अमेरिकास्थित तपाईंहरुका कुशल राजदूत (डा. अर्जुन कार्की) संग कुरा गरें। उहाँले पनि यो विषय मसंग उठाउनु भएको थियो। यो विषय’bout डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले हेरिरहेको छ।”
“यस’bout मैले ‘होमवर्क’ (गृहकार्य) गरिरहेकी छु,” उनले भनिन्।